Mustaf Dhuxulow oo shaaciyay sababta soo celceliya khilaafka DFS, Jubbaland & Puntland – Banaadir Times
Mustaf Dhuxulow oo shaaciyay sababta soo celceliya khilaafka DFS, Jubbaland & Puntland
By banaadir 2nd January 2021 90 No comment
Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo kamid ah Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dowladda Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu burburinayo dowlad Goboleedyada.
Waxaa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan marnaba isku dayin inay dowlad Goboleedyada siyaasadda iska fahmaan, sidaas daraadeedna meesha looga saaray Madaxweynayaashii dowlad goboleedyada, Hir-Shabeelle, Koonfur Galbeed & Galmudug.
Mustaf Dhuxulow oo ka hadlayay Shirka Magaalada Garoowe ayaa sheegay in sababaha uguw eyn ee soo ceceliya khilaafka Dowladda, Maamulka Jubbaland & Puntland ay tahay Arrimo siyaasadeed iyo inay Madaxweyne Farmaajo kala Shaqeyn waayeen in dib loo doorto.
“ Madaxweyne Farmaajo ma rabyo in uu la heshiiyo dowlad goboleedyada, kuwii kala Shaqeyn waayay in dib loo doorto meesha aytuu ka saaray, Jubbaland & Puntland caqabad ayaa lagu furay, qof ka hadashayna waa la la’yahay ayuu yiri” Mustaf Dhuxulow.
Ugu dambeyn Mustaf Dhuxulow ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi farmaajo in dalka Ereteriya oo uu xukumayo Madaxweyne kaligiis talis ah uu u diray Ciidamo si loogu tababaro, isaga oo sheegay in Ciidamadaas loogu talo galay inay dalka kusii haayaan Madaxweyne Farmaajo.
Sanbaloolshe” Madaxweyne Farmaajo wuxuu Ciidamada u kala saaray keenna & Tuugada”
Dagaal ka dhan ah Al-Shabaab oo looga dhawaaqay Gobolka Baay
Guux hareeyay Kulanka Maanta ee Golaha Shacabka
By banaadir 3rd September 2018